Realme na-akpọsa kalenda nke mmelite na gam akporo 10 | Gam akporosis
Realme bụ otu n'ime ụdị ọrụ kachasị mma nke ọnwa ndị a, na ọkwa dị iche iche nwere mmasị. Dị ahụ ahapụla anyị na ekwentị dị ka XT E wezụga 5 na 5 Pro nke akara China. Companylọ ọrụ ahụ na-abawanye na ahịa, yana atụmatụ ịbanye Spain gụnyere. Ugbu a, ha hapụrụ anyị kalenda nke mmelite ha gam akporo 10.
Dị ahụ na-esonyere ndị ọzọ dị ka Nokia, ndị bipụtara kalenda nke mmelite ha na gam akporo 10 izu gara aga. N'ihe banyere Realme, ndị ọrụ ga-echere ọnwa ole na ole iji nweta mmelite a. Kemgbe kalenda anaghị amalite ruo mgbe 2020 n'okwu a.
N'ime ọnwa mbụ nke 2020 ụlọ ọrụ ga-amalite imelite ekwentị ha, dika akpọsaara ha. Realme 3 Pro, 5 Pro, X na XT bụ ndị mbụ nwere ohere ịnweta gam akporo 10. Ọ ga-abụ na nkeji iri na ise nke afọ. Kalenda zuru ezu, nke izizi gosipụtara ya bụ nke a:
Ọ bụrụ n ’ịmara ntakịrị maka ekwentị onye nrụpụta, ị ga - ahụ na e nwere ụdị ma ọ bụ ọkwa ụfọdụ na - anọghị na ya. Companylọ ọrụ ahụ ekwughi ihe ọ bụla gbasara nke a, yabụ na anyị amaghị ma ụdị ndị a ga-echere ma ọ bụ na ha agaghị enwe gam akporo 10 ozugbo.
Ma na ọ dịkarịa ala anyị nwere ndepụta mbu nke ekwentị Realme nke ga-enwe ohere ịnweta gam akporo 10, kwadoro ya site na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Ọ bụ ọ dịkarịa ala ozi ọma maka ndị ọrụ nwere ekwentị ndị a, ndị maara na ha ga-enwe mmelite ahụ na eze.
Obere obere anyị na-ahụ ka ụdị ndị ọzọ si aga na-ekwupụta usoro melite ha na gam akporo 10, ugbu a ịbụ uzo nke Realme, nke bụ ụlọ ọrụ na-eme oghere n'ahịa. Ya mere, ọ dị mkpa iburu kalenda a n'uche, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta igwe ndị ọzọ na Spain na ọnwa ndị na-abịanụ, dịka ha kwuputara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme na-ebelata kalenda nke mmelite na gam akporo 10